Inzika - kuyinto zinendima ebalulekile umjikelezo wamanzi Emhlabeni. Basuke imali kusukela emoyeni noma iwe amafu. Ingabe amanzi ezifundeni ezehlukene (okuqinile noma uketshezi).
Ngu ubunjalo ukulahlekelwa zihlukaniswe izinhlobo ezintathu - drizzling, obekiwe, okwandile esindayo.
Esimweni sokuqala, kubonakala njengoba ehlele e-okushisa ezimbi futhi omuhle. Lokhu kungaba amanzi emihle, efana sintanta emoyeni, noma ukudla okuqinile ezimhlophe (kufika ku 2 mm ububanzi), okubizwa ngokuthi yi- "iqhwa okusanhlamvu". Uwela endaweni encane, awuhambi ngaphezu kwehora.
kwezulu ezinamandla zakha bedle front efudumele. Bahlale bekulungele eside (amalanga emibili), iyunifomu, baqala futhi baphethe kancane kancane, ushintsho oluncane in ukushuba kwezulu uyalandelwa.
Nge predominance izimpi ezibandayo kungabonakala nasemkhakheni Izimvula. Bona baqala ngokuphazima kweso kungalindele muntu siphele, futhi ngendlela emangalisayo ukushuba kunyakaza. Kungaba usuku imizuzu embalwa 2 amahora. Omunye wabo eziwuhlobo zeqhwa.
Zeqhwa - luningi KULETHA okuqinile, okuyinto iwe cumulonimbus (obukhulu) amafu ikakhulukazi ngenkathi ezibandayo. Ngokuvamile ihlala akusiyo eside kakhulu, kuze kube 1-2 amahora (ngokuvamile kuze kube isigamu sehora). Ngokushesha impela ke iyasha njengoba lunesibalo ongaphakeme.
Umbuzo: "Isithwathwa: ukuthi kuyini futhi kwakhiwa kanjani it is," ungakwazi ukuphendula ngendlela elandelayo. Izendlalelo emkhathini, lapho akhiwa emafwini, abe lokushisa -5, -7 degrees, futhi ngenxa lemali obanele of ukushisa eduze phansi (ukuba kwaba imvula enkulu) futhi kukhona engokwemvelo.
Eqhwa kuye, njengoba umthetho, abe Usayizi medium noma encane. Eza ndawonye futhi bayasilela ishq, ngokushesha ukwakha ungqimba eziphakeme zomhlaba.
Libuye ababuthakathaka zeqhwa. Hlobo luni kwezulu kanye umehluko? Phendula impela nje: kulesi simo, umfutho kuyehla, neqhwa ishq avele "ezomile". Uthatha ayisekho kuka ihora elilodwa.
Zeqhwa - kuyingozi noma cha?
Lokhu uhlobo kwezulu ngokuvamile ibangela i-ukubonakala ovundlile aphansi. Uma izulu Uhlolojikelele ecacile ezibukwayo ivela 6 kuya ku-10 km, ngesikhathi iqhwa eshaweni sehliselwe 2-4 km, namamitha ngezinye izikhathi afinyelela ku 100-500, kuye ngokuthi ukushuba. Ngaphansi sezulu izimo ezinjalo kudingeka qaphela emigwaqweni ngenxa kwengozi zomgwaqo.
Zeqhwa - ingenye eziyingozi kakhulu izenzakalo Meteorological, lapho ubukhulu kwezulu ifinyelela 20 mm isikhathi sifika kumahora 12.
Ingase futhi kuhambisane ipheshulwa eqinile womoya, okwenza ematfuba ku isiphepho esikhulu seqhwa. Ezimweni ezinjalo kungcono sigweme ukuthola bengaphandle.
Zeqhwa - into egcina njengoba isigubhukane esaqala ngalo. Ngo sezulu ecacile, ngokuvamile indawo nelanga elikhanyayo.
Ukuze ukwakheka iqhwa noma imvula izimo ezihlukahlukene lokushisa ziyadingeka. Nokho, phansi ngezikhathi ezithile iwe futhi kwezulu okuxubile. Olunye uhlobo kuyinto zeqhwa nemvula. Ibuke kungaba ngokuvamile bakhala ngaphansi noma entwasahlobo.
Ngokusho ukwakheka kuba inhlanganisela amanzi amaconsi futhi amakhekheba eqhwa. Ngemva nabo emhlabathini ebusweni kwezulu ezifana at zero lokushisa ukuncibilika umnkantsha e-lokususa, ukwakha ungqimba ice (ice).
Olunye uhlobo kwezulu okuxubile kuba imvula esiyingele. It is ngokuvamile bebodwa njengoba sezulu mkhuba olulodwa. It uwela at zero lokushisa emoyeni futhi limelela iqhwa ishq ezinkulu, encibilika ngaphambi uxhumane ne emhlabathini.
Zeqhwa imvula zeqhwa - ziyafana yini noma cha?
Le migomo, njengoba isimo sezulu izenzakalo, ehlukene kakhulu, kodwa ngezinye izikhathi zisatholakala udidekile. Ngokuvamile lokhu kwenzeka ngenxa omqondofana kwegama elithi "imvula" kusukela Igama lokuqala futhi igama elithi "imvula" ezisukela enkulungwaneni yesibili. Ukuze ukhumbule ukuthi lena akufani, kubalulekile ukuqonda ukuthi iyini le imvula okokuqandisa.
It kungokwalabo izinhlobo Ukuntuleka kwezulu, futhi kwenzeka emazingeni okushisa ezimbi phansi -15 degrees. Ngokuvamile ihlala Adalberto isikhathi eside ngaphandle kokushintsha ngegalelo lako. Zeqhwa imvula - kungcono okuqinile, izingcezu esobala ezimhlophe ice, ngaphakathi okuyinto kukhona amanzi esimweni liquid.
Ngemva nabo emhlabathini kudala ice ngendlela efanayo njengoba izihlambi neqhwa ezimanzi. Izithombe kulezi zinkanyezi zemvelo kalula itholakala kulesi sihloko.
Jon Abrahams - nomdlali wamabhayisikobho waseMelika nge izindima ezihlukahlukene futhi ukhiqizwe kakhulu
Yamathambo ezinsaneni: izimpawu zesifo
Usizo Olufanelekile Ekutholeni Imali